'Wayebukeka emsulwa oweba usana' | News24
'Wayebukeka emsulwa oweba usana'
Johannesburg - Iboshelwe esiteshini samamaphoyisa aseRustenburg intombzane, 19, eyayibukeka njegoMsamariya olungile ngezinsolo zokuthumba usana oluzelwe ngoMsombuluko.
Ngokusho kokhulumela amphoyisa, uCaptain Paul Ramaloko, le ntombzane yakhuluma nomama wengane ngaphandle kwesibhedlela saseRustenberg iJob Shimankane Tabane lapho ayelinde azomlanda ngemuva kokubeletha.
"Umsolwa wabongela unina ngosana wamnika nemali engu-R23 ukuba ayothenga azokudla. Lo mama wabe esenika le ntombazane ingane ukuba ayibambe njengoba esayothenga esitolo sasesibhedlela," kusho uRamaloko.
OLUNYE UDABA: Uvele enkantolo owebe usana esibhedlela
"Ngesikhathi esebuya esitolo ingane nomsolwa babengasekho. Umsolwa watshela abasebenzi basesibhedlela okuyibo abashayela amaphoyisa aseRustenburg ucingo."
URamaloko echaphuna amazwi esisulu ngesikhathi sesiyitholile ingane yaso uthe: "Ngicabanga ukuthi ngavele ngamelwa umqondo isikhashana. Le ntombazane yayibibukeka imsulwa kumina. Angifuni nokwazi ukuthi ibihloseni ngengane yami."
"Uphenyo lwamaphoyisa lwabaholela endaweni yaseSondela EXT-22 eduzane naseBoitekong, eRustenburg emzini wabazali bomsolwa," kusho uRamaloko.
Umsolwa waboshwa, wathweswa icala lokuthumba kanti wahluleka ukuchazela amaphoyisa ukuba wahambelani nengane.
Umama kamsolwa utshele amaphoyisa ukuthi waxakeka indodakazi yakhe ifika nengane ekubeni yayingakhulelwe.